Ngabe uTrump usecula elinye iculo ngodonga eMexico - Bayede News
ISIFISO esikhulu seqembu lesizwe lebhola laseMexico bekuwukudlulela esigabeni esilandelayo semidlalo yeNdebe YoMhlaba eqhubeka eRussia obekuzoba uphawu lokwamukela uMengameli omusha u-Andres Manuel Lopez Obrador. Iqembu laseBrazil lizishabalalise zonke lezi ziﬁso ngasekuqaleni kwesonto lihlula iMexico ngamagoli amabili eqandeni. Noma iMexico iphumile kulo mqhudelwano, kodwa uMengameli u-Obrador yima ezongena ngokusemthethweni kulesi sihlalo okubhekeke ukuba abe kuso iminyaka eyisithupha. Ngesikhathi semikhankaso u-Obrador lapho ebehambela khona ubezibiza ngesisebenzi sabantu esimele uguquko ezweni. Lena kube ngenye yezindlela abegadla ngayo kuzwele kwabebanga nabo ngoba nabavoti bebemthwele ngeqoma. Sekubalwa amavoti kutholakale ukuthi uthole angama-53% okuyisibalo esiphindaphindiwe kunesembangi yakhe ngokusho kwabekhomishini yokhetho ezweni. “Namuhla bakwamukele ukunqoba kwethu,” kusho u-Obrador kubalandeli bakhe abebebhiyoza emuva kokumenyezelwa ngokusemthethweni kwemiphumela yokhetho. Emuva kokuqinisekiswa ngokunqoba kwakhe, uMengameli osephuma esikhundleni u-Enrique Pena Nieto umshayele ucingo emhalalisela wathembisa nokuthi kuzoba nokubambisana okuhle uma sekunikezelwana ngezintambo.
U-Obrador kubhekeke ukuba angene kulesi sikhundla ngokusemthethweni lulunye kuZibandlela. Zisuka nje u-Obrador ubehamba phambili ngamavoti kulolu khetho lwangeSonto. Kwesinye isikhathi ubeke abonakale ehamba phambili ngamaphuzu angama-20 eshiyela kude izimbangi zakhe. Kuthe sekusele amahora amabili ukuthi kuvalwe izikhungo zokuvota, izimbangi zakhe ezintathu bese ziyivumile induku nabalandeli bakhe sebeqalile ukubhiyozela ukunqoba. Enkulumweni yakhe abeyiqondise kubalandeli, uthe uzokwakha ubudlelwano obusha ne-USA, obuzogxila ezimpandweni zokuhloniphana phakathi kwala mazwe nasekwaziseni abantu abawasebenzele kanzima nangokwethembeka lawa mazwe. Wengeze ngokuthi abantu abafuna ukuphuma ezweni bayozinza kwamanye kumele bakwenze lokho ngokuzikhethela, hhayi ngoba kukhona lapho beshoda khona. Uthe abantu baseMexico kumele bahlale bethokozile ezweni abazalwela kulo, lapho kukhona nemindeni yabo ngisho nezithethe namasiko abo.
UMengameli uLopez Obrador uphinde wethembisa ukubhekana ngqo nodlame nokulwa nenkohlakalo athe idalwa kakhulu isimo sezepolitiki esingahambisani nesikhathi samanje. “Sinesiqiniseko sokuthi lesi sihlava siwumphumela wokungalingani kwinhlalakahle yomphakathi kanjalo nokungalingani kwezomnotho. Ngenxa yenkohlakalo sekuqubuke nodlame ezweni lethu,” kusho uMengameli enanelwa yinhlokomo kubalandeli. Uphinde wakugcizelela ukuthi uzoqala izinhlelo zokwakha ukuthula ezizohlanganisa abazobe bemele i-United Nations, abamalungelo esintu, nezinhlangano zezenkolo ukuze kubhekwane ngqo nesihlava sokubulawa kwabantu esikhule ngendlela emangalisayo ngesikhathi sokubusa kukaMengameli uPeña Nieto, osephuma esikhundleni. Baningi abamgxekayo ngokwehluleka ukubhekena ngendlela nobugebengu obudla lubi ezweni, inkohlakalo nokungalingani ngakwezomnotho.
Ebhala enkundleni yokuxhumana uTwitter uMengameli uDonald Trump wase-USA uthe umﬁsela okuhle kodwa uLopez Obrador ngokuqokwa ekuholeni iMexico. “Ngibheke ukusebenzisana kahle naye. Kuningi okumele kwenzeke okuzohlomulisa i-United States neMexico.” UNdunankulu waseCanada uJustin Trudeau naye akasalanga ngaphandle kulabo abahalalisele u-Obrador. Uthe amazwe abo anezinto eziningi abambisene kuzo, nabantu bawo banokusondelana okukhulu futhi banobudlelwano obuqinile nakwezohwebo yingakho bebona iMexico iyizwe elibalulekile emhlabeni. “Ngibheke ukuthi sisebenzisane kahle noMengameli uLópez Obrador, noHulumeni wakhe neqembu aliholayo iMexican Congress ekwakheni ubuhlobo obuhlabahlosile, ukukhulisa umnotho okuzohlomulisa wonke umuntu kuphinde kubhekelelwe namalungelo abantu nokulingana kwabo,” kusho uTrudeau. Kubantu abangayizigidi ezingama-89 abavotayo baseMexico , ukhetho lwangesonto belufana nenhlolovo ngesimo sezepolitiki ezweni nokuthi umnotho wezwe ubhekephi nokuphela kwesikhathi sokubusa sikaMengameli u-Enrique Peña Nieto, obenikwe kuphela ihlandla elilodwa eliyiminyaka eyisithupha.
Omunye wabavotele u-Obrador uMaria del Carmen Munoz ongumnsinsi wokuzimilela eMexico uthe usemuseke izikhathi ezimbili emizamweni yakhe yokuba uMengameli phambilini kodwa engaphumeleli. Uthe kulokhu kwesithathu ubageze igilo futhi kwenzeke ngendlela ebe nobulungiswa. “Ngimeseka ngoba ngiyamethemba futhi ngiyakholelwa kuye. Okunye okwenza ngimeseke ukuthi uHulumeni okhona njengamanje unuka phuhle inkohlakalo. Intsha yaseMexico iphila impilo enzima ngenxa yezidakamizwa ezitholakala kalula. Kulolu khetho kuthiwa bebelinganiswa ezinkulungwaneni ezili-13 abantu abaphakathi kweminyaka eli-18 nengama-23 abebevota okokuqala. Indlela ebheke ekunqobeni kwakhe ibonakale zisuka nje ngentsha ephume ngobuningi imeseka. Umuzwa obukhona emazingeni aphansi ukuthi abantu abaneme ngamaqembu amadala amakhulu. Unconywe nangezinto eziningi azenza ngesikhathi esaphethe eMexico City njengokunika impesheni kubona bonke abadala nokwakha izikole zamabanga aphezulu ezindaweni ezazingakaniwe. “Kuningi okunye akwenzile njengokuqhamuka nohlelo lwezincwadi zokushayela ezingavuselelwa ukuze uHulumeni angalokhu ethatha imali kubantu ngokungenasidingo,” kusho omunye wabalandeli bakhe.
Ezinye zezinselelo azobhekana nazo kulesi sikhundla izinsongo zikaMengameli uTrump zokuhoxisa isivumelwano sokuhwebelana namazwe aseNyakatho yeNingizimu iNorth American Free Trade Agreement, kanjalo nokwakha udonga olude oluwumngcele phakathi kweMelika neMexico ukuze abantu baseMexico bangangeni khona. Asazi noma kusazoya ngawo yini amagama enkehli ngoba kuningi abekuthembisa esakhankasa njengokushintsha isithabathaba sezindlu zombuso sibe yindawo yomphakathi esikhundleni sokuthi kube yilapho kungena khoba abakhethiweyo kuphela.